ဘာစီလိုနာ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ "ဘာစီလိုနာ
Ansus Fati သည်သူ၏ပွဲဦးထွက်ပြီးနောက်ဘာစီလိုနာအသင်းပေါ်လာဖို့ကဒုတိယအသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ JOSEP ဂို့ / AFP / Getty Images
Ansus Fati အဆိုပါ 5-2 အောင်ပွဲကာလအတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်စတင်မိတ်ဆက်ခံရပြီးနောက်ဘာစီလိုနာအဘို့အလာလီဂါအတွက် feature မှဒုတိယအသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည် တနင်္ဂနွေရီးရဲလ် Betis ။ 19659006] နှင့်အတူ Lionel Messi ဆွာရက်ဇ် et Ousmane Dembele အားလုံးဒဏ်ရာကြောင့်ပျောက်ဆုံး Ansus - 16 နှစ်ပေါင်း 298 ရက်ပေါင်း - ဟုချေါသ ကားလို့စ်ဖာရ
Ernesto Valverde အစားထိုးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်း, ဖာရအတူတိုက်ခိုက်မှုစတင် Antoine Griezmann et ။ Rafinha ဘာစီလိုနာ 5-1 ဦးဆောင်သည့်အခါဒုတိယတစ်ဝက်တွင်သူ့ကိုမယူမီ။
အဆင့်ဘာစီလိုနာကစားသမား: တောက်ပြောင် Betis အပေါ် Griezmann ရှုံး
- ESPN Fantasy Premier League: ယခုမှတ်ပုံတင်မည်
အဆိုပါစပိန်ချန်ပီယံသည်သူ၏ Griezmann နှစ်ကြိမ်သွင်းယူနှင့်အတူပွဲအနိုင်ရခဲ့သည်။ ဖာရက်, Jordi Alba et အာတူရို Vidal ဒါ့အပြင်ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြသည်။
"Ansus အများအပြားအရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အစာရှောင်သည်နှင့်အများကြီးအာကာသကိုအသုံးပြုသည်," Valverde ဂိမ်းပြီးနောက်အသစ်တခုညီလာခံကပြောသည်။
"ငါသည်သူသည်အလွန်ငယ်ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့သိကြ၏။ ဒီအစဉ်အမြဲငါပွဲထွက်ခဲ့ပြီးကြပါပြီအငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဖွဲ့အပေါ်အခြားကစားသမားများ၏အသက်အရွယ်မကြည့်ကြပါလျှင်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဖြစ်စေသူမ၏အသက်အရွယ်ကိုကြည့်မည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့ကထည့်နိုင်သည်ဘယ်အရာကိုကြည့်ရှုပါကငါတို့အားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေ။ "
ဂိမ်းပြီးနောက်, သူ့အသွင်အပြင်စဉ်အတွင်းကျဉ်း hits ဖြစ်ပေါ်ရသော Ansus, ရှည်သည်သူ၏အသင်းဖော်ထက်မြေပြင်ပေါ်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
"ကျွန်မရဲ့မိဘများနှင့်ငါ့မိသားစု (19459047) စောင့်ကြည့်, ငါ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ဤအဆင့်မှာငါ့ကိုလိုက်ပါသွားသောသူသည်ဤလူအပေါင်းတို့ကို" ဟုသူကသတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။
ငါကမယုံကြည်နိုင်ဘူး။ ငါသည်ဤအခိုက်ပျော်မွေ့ချင်တယ်။ သမ္မာတရားကိုငါရှေ့တော်၌အလွန်ဦးနှောက်အာရုံကြောခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါသာလူတိုငျးအတှကျကြေးဇူးတငျစကားများရှိသည်: အလွန်ကောင်းစွာငါ့ကိုကြိုဆိုကြသူကလပ်, မန်နေဂျာ, ပရိသတ်တွေ။ "
U19 များအတွက်နောက်ဆုံးရာသီကစားသူကို - - Ansus မက်ဆီနဲ့တူကစားသမားထက်အသက်ငယ်သည်နှင့် Bojan Krkić သူတို့ဒီကလပ်ဟာပရီးမီးယားလိဂ် Catalan တှငျပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအရည်အချင်းပြည့်မီရန်အငယ်ဆုံးကစားသမားမဟုတ်ပါဘူးအရည်အချင်းပြည့်မီသည့်အခါကြပြီ။
Vincent Martinez 16 နှစ်ပေါင်းသူလိဂ်အတွက်ဘာစီလိုနာအဘို့အလာလီဂါ၌သူ၏ပထမဦးဆုံးရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုဖန်ဆင်းသည့်အခါ 278 ရက်ပေါင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ရာသီ 1941-1942 - qu'Ansu အောက်မှာ 20 ရက်။
ရှည်ရှည်ညှိနှိုင်းမှုအပြီးတွင်ဘာစီလိုနာနောက်ဆုံးတော့အစောပိုင်းကဒီနွေရာသီမှာ Ansus သစ်တစ်ခုသဘောတူညီမှုချည်ထားလေ၏။ အဆိုပါတိုက်စစ်မှူးစာချုပ်နှစ်ခုထက်ပိုသောနှစ်ပေါင်းတစ်ဦး extension ကို option နဲ့အတူ 2022 သည်အထိကလပ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အသစ်သောအခြေအနေများလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ € 100 သန်း၏တစ်ဦးကတင်ရန်အပိုဒ်စာချုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းခဲ့သည်။
e-mail, သူအခြားနုပျိုကလပ်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုသဘောတူညီချက်ညှိနှိုင်းနေစဉ်မှားလက်၌တှေ့ရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အဆိုပါဆွေးနွေးမှုများ, ရှည်စပိုင်းတွင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ကြာခဲ့သည်။ ကြယ် Ilaix Moriba ။
အသစ်ကစာချုပ် Ilaix အသေးစိတ်အီးမေးလ်တစ်ခု Espanyol ၏ဝန်ထမ်းအစားသူ၏အေးဂျင့်မှစေလွှတ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအရင်းအမြစ်ကလပ်ရရှိနိုင်ပါသည်လုပ်ပိုက်ဆံအားဖြင့် "စိတ်ဆိုး" ခဲ့ကြောင်း ESPN Espanyol FC အသင်းကိုပြောသည်။
အလှည့်အတွက် Ansus ကိုယ်စားလှယ်များအထူးသဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥရောပအတွက်အကြီးမားဆုံးအချို့တို့ကပြအကျိုးစီးပွားဘာစီလိုနာနှင့်အတူပိုကောင်းတဲ့သဘောတူညီချက်များအတွက်လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တာ။ ကလပ်အသင်း။
ဘာစီလိုနာအမြဲ Ansus အသစ်တစ်ခုသဘောတူညီချက်နှင့်ခြွင်းချက်လစာတိုးမြှင့်ပေးဖို့စီစဉ်ထားခဲ့သည်။ Ilaix နှင့်အတူကအကယ်ဒမီကနေ Top-rated ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကလပ်မကြာသေးမီကသူတို့ထဲကအတော်များများ Borussia တူသောကလပ်ကိုသွားဖို့ရှေးခယျြမြင်နေပြီးနောက်၎င်း၏အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားမှာအခြေအနေများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ဒေါ့မွန်, မန်ချက်စတာစီးတီးနှင့်မိုနာကို။
Ansus ဂီနီဘစ်တှငျမှေးဖှားခဲ့ပေမယ့် Catalonia အတွက်အလွန်ငယ်ရွယ်အခြေချခြင်းနှင့် 10 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်ကတည်းကကလပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူကအကယ်ဒမီအတွက်တိုးတက်နှင့်စပိန်တတိယဌာနခွဲအတွက် B ကအဖွဲ့နှင့်အတူယခုရာသီဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/barcelona/story/3928669/barcas-16-year-old-youngest-since-41-to-debut
PSG အသင်းအဲရစ်-လုပျသငျ Choupo-Moting နှင့်အတူထိုးစစ်စံချိန် beats! - Culturebene
နှစ်ဆနှင့်အတူ Toulouse ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့ Choupo-Moting တံခါးကို PSG အသင်း! - Culturebene